US Chakavanzika Chirevo Mibvunzo Chinese Epidemic Data? VaTrump: Hapana mushumo wakagashira Vagadziri nevatengi - China Fekitori - Quanzhou waimaoniu Import uye Export Trade Co, Ltd.
Sezvo denda renyumamu nyowani nyowani muEuropean America nyika dziri kuramba dzichiwedzera zvakanyanya uye dzimba dzekudzvinyirirwa dzichidzvanywa nekuda kwekusagona kupindura, China yakazove chinangwa che "kunyudza mapani" munyika imwe neimwe, nekunyomba data reChinese re "hunyengeri" ndeimwe yeajenda.
Sekureva kwemushumo weUS Consumer News uye Bhizinesi Channel (CNBC) musi waApril 1, Bloomberg News yakambotaura nezve vatungamiriri vatatu vemuUSA muchirevo chakavanzika chekuti nharaunda yehungwaru yeUnited States yakanga isina mubvunzo nezvehuwandu hwekuongororwa uye kufa kwehunyorwa nyuchi. kuChina mune chakavanzika mushumo.
Nekuda kweizvozvo, izvi zvakatemerwa Mutungamiri wavo, VaTrump, ivo pachavo pamusangano wevatori venhau kuti havasati vambogamuchira chero danho ripi nezvedenda kuChina.
"Tinoziva sei kana ivo (China) vakanyoreswa kana kutsigirwa," VaTrump vakapindura vachipindura mibvunzo nezve data rakabuda muChina: "Ini handisi wekuChina accountant."
VaTrump vanoramba kuvepo kweanodaidzwa mubvunzo wekubvunzurudza pamusoro peChina kubuda kwe data
Zvinoenderana nehuwandu chaihwo kubva kuHopkins University kuUnited States, kubvira 9:43 ndiri musi waApril 2, Beijing nguva, huwandu hwehuwandu hwezviitiko zvitsva zvegoridhe muUnited States zvasvika 210,000, zvasvika 215,417, huwandu hwevanhu vakafa mazana mashanu nemakumi mashanu nevaviri, uye huwandu hwevakaporeswa hwaive mazana masere nemakumi mana nemashanu. . Huwandu hwevanhu vachangoburwa uye kufa kwezuva nezuva muUnited States hwasvika padanho nyowani mumaawa makumi maviri nematatu apfuura, uye huwandu hwekuongororwa uye kufa hwakapfuura huwandu hwenhoroondo kuChina (kusanganisira Hong Kong, Macao neTaiwan) (huwandu hwese 82,591 yakasimbisa kuongororwa uye kufa kwekuwedzera). Mhosva makumi matatu nemakumi matatu nemaviri).
Ndege yekuAmerica yekufambisa yakatakura neChina mishonga yekurapa
Ku "gadzira vafi", United States yakatanga kuendesa nekukurumidza nhumbi dzekurapa nendege kubva kuChina, uye "mabasa anokosha" akabatsira hurumende yehurumende nekukurumidza. Musi waMbudzi 29, ndege yakabva kuShanghai uye yakarongedzwa nemakumi matatu ezviuru zveN95 masks, mamirioni 1,7 yekuvhiya, uye zviuru makumi mashanu zvehembe dzekuzvidzivirira nezvimwe zvekuchengetedza zvakabudirira kusvika kuNew York's JFK International Airport. Idzi ndidzo ndege dzekutanga kuuya muNew York pasi peWhite House chipangamazano mukuru, mukwamwene waTrump mukwambo we emergency emergency airlift program, Air Bridge Project.
Asi kunyangwe zvakadaro, kubvunza kwekuzvitutumadza kweChina nenyika dzekumadokero, inotungamirwa neUnited States, hakuna kumbobvira kwabviswa, uye izvo zvinonzi "zvakavanzika zveChinese" uye "manyepo echiChina" zvinogara zvichingove zvinopokana. Zuva rimwe chete munaKubvumbi, mumiriri wedu muFrance neBritish Embassy zvakabudirira kubvisa zvinyorwa zvisina hunyanzvi neFrance media nenhau dzeBritain izvo zvakadzvinyirira kubudirira kweChina kurwisa denda.
Tichitarisana nekupomerwa kusiri kwechokwadi kubva kune vekunze vezvenhau, World Health Organisation (WHO) vakasangana munaKubvumbi 1st, vachitaura kuti kune huwandu hukuru hwezvakanakisa zveuchapupu hwesainzi-hunobva kuChina nedzimwe nzvimbo mazuva ese. Usati chikamu chenyika nekusada kubatsirana kana kuve opaque Panyaya yeruzivo rwekutsvagurudza hutachiona hwepasi rose, kune imwe kuGermany, imwe kuSingapore, imwe kuUnited States, uye ina kuChina.
Song Luzheng, munyori weObserver.net uye muongorori paChina Research Institute yeFudan University, akataura zvakare muParis Diary nhepfenyuro kuti China "data ndiyo yakanyanya kuzara uye yakavimbika, zvese maererano nekugona uye maitiro ekuedza." Maererano nemaonero, uyewo ane zvikuru duramanzwi ukoshi. Idzo Western yakabuditswa data haina kusanganisira vanofungidzirwa, vanyoro, kana kunyangwe vanhu saymptomatic. Kurongeka kwayo kwakatoipa kupfuura iko kweChina.
"Zvisinei, izvo zvisina musoro munyika ino ndezvekuti China haina kupomera iyo Western data kuti haina kurongeka, asi West iri kuirova izvo."